सरकार उदार भएकाले प्रदेश प्रमुखलाई दुई वर्ष काम गर्न दियो : प्रचण्ड | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १९ कार्तिक २०७६, मंगलवार १२:०२ लेखक Sabita Roka
एनसेलको लाभकर विवाद: टेलियाले तेस्रो पटक भन्यो– कर तिर्ने दायित्व छैन, राज्यको ६५ अर्ब गुम्ने खतरा !
काठमाडौं । स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाभकर तिर्ने…
काठमाडाैं । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अनुसन्धान…
नेपाली गृहिणीहरु उच्च जोखिममा, ५५ ग्याँस उद्योगमध्ये ४८ ग्याँस उद्योग मापदण्ड विपरित !
काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ५५ ग्याँस उद्योगमध्ये ४८ ग्याँस उद्योगले अहिलेसम्म ग्यास बोटलिङको न्युनतम मापदण्ड समेत् पूरा गरेका…
काठमाडौं । आठ वर्षदेखि बालबालिकालाई दिइँदै आएको रोकिएपछि देशभरका करिब १६ लाख बालबालिका प्रभावित भएका छन् । विद्यालय जान…
ढुगांखानी र क्रसरबाट एसएसपी ऐरको अबैध रकम असुली
ललितपुर । ललितपुर जिल्लाका अवैध ढुंगाखानी र क्रसर जनप्रतिनिधी र प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा मापदण्ड विपरित चल्दै आएको खुलासा भएको…
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीबाट अन्यायमा परेपछि राजनीतिमा होमिएर एमालेबाट सांसदमा निर्वाचित भएका नवराज सिलवालविरुद्धको मुद्दा जसरी पनि…